Ny mpizaha tany tsy misy tifitra booster dia afaka miditra ao Israely raha tsy amin'ny vondrona
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Israel Vaovao Vaovao » Ny mpizaha tany tsy misy tifitra booster dia afaka miditra ao Israely raha tsy amin'ny vondrona
Airlines • Airport • Aviation • Vaovao Mafana Eoropeana • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovaom-panjakana • Vaovao momba ny fahasalamana • Hospitality Industry • Hotels & Resorts • Israel Vaovao Vaovao • Vaovao • People • fanorenana • Resorts • tompon'andraikitra • Safety • Tourism • Fitaterana • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • malaza ankehitriny
Ny mpizaha tany tsy misy tifitra booster dia afaka miditra ao Israely raha tsy amin'ny vondrona.
Ny fanokafana indray ny sisin-tanin'i Israely dia heverina ho dingana lehibe amin'ny famerenana amin'ny laoniny ny indostrian'ny fizahantany Israeliana, izay ravan'ny valan'aretina COVID-19 sy ny fameperana miaraka aminy.
Ireo mpizahatany iraisam-pirenena tsy misy vaksiny booster dia afaka miditra ao Israely.
Ireo mpizahatany tsy manana fitifirana vaksiny COVID-19 fahatelo dia takiana mba ho anisan'ny vondrona fitsangatsanganana.
Manan-kery rahampitso 9 Novambra 2021 ny fepetra vaovao momba ny fidiran'ny mpizahatany vahiny Israeliana.
Ny governemanta israeliana dia nanambara androany fa ireo mpizahatany vahiny tsy misy fitifirana booster manohitra ny COVID-19 dia mbola avela hiditra ao Israely, fa ao anatin'ny vondrona fitsangatsanganana voalamina ihany.
Afaka miditra ny vahiny vahiny tsy misy vaksiny booster Isiraely raha toa ka enim-bolana mahery no lasa hatramin'ny nahazoan'izy ireo ny tifitra faharoa, hoy ny minisitry ny fahasalamana sy ny fizahantany Israeliana tamin'ny fanambarana iraisana.
Hiharan’ny fepetra maromaro anefa ireo mpitsidika ireo, hoy ny minisitera.
Tsy maintsy omen’ny minisiteran’ny fizahantany fahazoan-dalana hiditra ny vondrona mpitety faritra Isiraely, ary ny mpikambana ao aminy - olona dimy ka hatramin'ny 40 - dia tokony ho avy amin'ny firenena manana toe-javatra ara-piraisana ara-piraisana ara-piraisana ara-piraisana ara-piraisana ara-piraisana ara-piraisana ara-piraisana ara-piraisana ara-nofo ary vaksinina amin'ny vaksiny eken'ny fanjakana. World Health Organization (OMS).
Hanomboka rahampitso ny fepetra vaovao.
Isiraely nanokatra ny sisin-taniny nanomboka ny 1 Novambra ho an'ireo mpizahatany tsirairay voasokajy amin'ny vaksiny eken'ny OMS - an'ny Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Janssen, Sinovac ary Sinopharm - raha tsy nandeha tany amin'ireo firenena voasokajy ho faritra "mena" izy ireo nandritra ny 14 andro lasa.
Manomboka amin'ny 15 Novambra, ireo mpizahatany, natao vaksiny tamin'ny vaksiny Sputnik V vita Rosiana, dia andrasana hiditra ao Israely. Tsy maintsy manao fitiliana serologie izy ireo, izay mamantatra ny antibody.
Ny minisitry ny fahasalamana Nitzan Horowitz dia nilaza androany fa "raha ny fizahan-tany ihany koa dia mila mianatra miaina miaraka amin'ny coronavirus isika."
Hoy ny minisitry ny fizahantany Yoel Razvozov: “Mbola lava ny lalana mankany amin'ireo mpizahatany miverina, ka tsy maintsy mihetsika haingana sy araka ny tokony ho izy isika mba hampitomboana ny isan'ny mpizaha tany tonga any Israely.”